အမျိုးသားထုကြားမှာ အကျီတောင် မဝတ်နိုင်အောင် ရောင်းနေရတဲ့အဖြစ် . - Barnyar Barnyar
အမျိုးသားထုကြားမှာ အကျီတောင် မဝတ်နိုင်အောင် ရောင်းနေရတဲ့အဖြစ် .
March 11, 2022 cele 0
အမျိုးသားထုကြားမှာ အကျီတောင် မဝတ်နိုင်အောင် ရောင်းနေရတဲ့အဖြစ်
ယခုတစ်ခေါက်မှာတော့ အရသာလဲရှိမဲ့ မျက်စိအစာလဲ ကျွေးနိုင်မယ့် မမအလန်းဇယားတွေရဲ့ လမ်းဘေး ဈေးရောင်းချမှုကြီးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသားတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးလျက် ရှိပါတယ်။
ပထမဆုံးနာမည်ကြီးတဲ့ Nong Mukda ဆိုတဲ့ အမျိုးဟာ လမ်းဘေးအကင်ဆိုင် ဖွင့်ထားပီး၊ ဒီဇိုင်းကာလာ အနေအထားမှာရော၊ သူမရောင်းတဲ့ အကင်အရသာတွေဟာ ကောင်းလွန်းတယ်လို့ စားဖူးသူတိုင်းက ပြောကြပါတယ်။
သူမဟာ မော်ဒယ်အလုပ်ကို စွန့်လွတ်ပီး၊ ယခုလို အကင်ရောင်းမှ ပိုနာမည်ကြီးလာတာကြောင့်၊ ဈေးသည်တစ်ယောက်ပဲ လုပ်တော့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမရဲ့ အကင်ဆိုင်လေးကိုတေ့ The Butcher Shop ဆိုပီး နာမည်ပေးထားပီး၊ လူငယ်တွေ စည်ကားတဲ့ ဆိုင်တဆိုင်အဖြစ်လဲ နာမည်ကြီးလျက်ရှိပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့၊ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါင်း ဖွင့်ထားတဲ့ ကြက်ပေါင်းခေါက်ဆွဲဆိုင်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုင်ရှင်လေးရဲ့ ထူးကဲကောင်းမွန်တဲ့ လက်ရာနဲ့၊ အပြောချိုရုပ်ချောတဲ့အပြင် ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်မှုတွေကြောင့်လဲ ဝယ်သူအမြဲပြည့်နေတဲ့ ဆိုင်လေးလို့ သိရပါတယ်။ ထိုဆိုင်လေးကတော့ Chicken Noodle Na Soi ဆိုတဲ့ နာမည်လေးလို့ သိရပါတယ်။
အမြိုးသားထုကွားမှာ အကြီတောငျ မဝတျနိုငျအောငျ ရောငျးနရေတဲ့အဖွဈ
ယခုတဈခေါကျမှာတော့ အရသာလဲရှိမဲ့ မကျြစိအစာလဲ ကြှေးနိုငျမယျ့ မမအလနျးဇယားတှရေဲ့ လမျးဘေး ဈေးရောငျးခမြှုကွီးဟာ ထိုငျးနိုငျငံက အမြိုးသားတှကွေားမှာ နာမညျကွီးလကျြ ရှိပါတယျ။
ပထမဆုံးနာမညျကွီးတဲ့ Nong Mukda ဆိုတဲ့ အမြိုးဟာ လမျးဘေးအကငျဆိုငျ ဖှငျ့ထားပီး၊ ဒီဇိုငျးကာလာ အနအေထားမှာရော၊ သူမရောငျးတဲ့ အကငျအရသာတှဟော ကောငျးလှနျးတယျလို့ စားဖူးသူတိုငျးက ပွောကွပါတယျ။
သူမဟာ မျောဒယျအလုပျကို စှနျ့လှတျပီး၊ ယခုလို အကငျရောငျးမှ ပိုနာမညျကွီးလာတာကွောငျ့၊ ဈေးသညျတဈယောကျပဲ လုပျတော့တယျလို့ သိရပါတယျ။ သူမရဲ့ အကငျဆိုငျလေးကိုတေ့ The Butcher Shop ဆိုပီး နာမညျပေးထားပီး၊ လူငယျတှေ စညျကားတဲ့ ဆိုငျတဆိုငျအဖွဈလဲ နာမညျကွီးလကျြရှိပါတယျ။
ဒုတိယတဈယောကျကတော့၊ သူငယျခငျြးနှဈယောကျပေါငျး ဖှငျ့ထားတဲ့ ကွကျပေါငျးခေါကျဆှဲဆိုငျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဆိုငျရှငျလေးရဲ့ ထူးကဲကောငျးမှနျတဲ့ လကျရာနဲ့၊ အပွောခြိုရုပျခြောတဲ့အပွငျ ဆကျဆံရေး ကောငျးမှနျမှုတှကွေောငျ့လဲ ဝယျသူအမွဲပွညျ့နတေဲ့ ဆိုငျလေးလို့ သိရပါတယျ။ ထိုဆိုငျလေးကတော့ Chicken Noodle Na Soi ဆိုတဲ့ နာမညျလေးလို့ သိရပါတယျ။
ဇနီးရဲ့မွေးနေ့ကို ရက်မှားယွင်းပြီး ပြင်ဆင်မိလို့ ဇနီးကစိတ်ဆိုးပီး အပြင်တွင် ညအိပ်လိုက်ရတဲ့ အမျိုးသား ..